Kureurura kweSEO Vatengesi | Martech Zone
Yekutsvagisa injini ndechimwe chidimbu chekushambadzira, uye inogona kunge ichivhiringidza uye ichigadzirwa sechiratidzo chekupaka muNew York City. Kune vanhu vazhinji kwazvo vari kutaura nekunyora nezveSEO uye vazhinji vanopesana. Ndakasvika kune vabatsiri vepamusoro munharaunda yeMoz ndikavabvunza mibvunzo mitatu yakafanana:
Ndeipi zano reSEO iro rinodiwa nemunhu wese risingakoshi?
Ndeipi nzira ine nharo yeSEO iwe yaunofunga kuti yakakosha zvechokwadi?
Parizvino, ndeipi nhema huru yeSEO?
Misoro yakati wandei iri pachena uye pane kupesana pakati pevanyanzvi, saka ini ndichakurega iwe utore yako mhedziso, iyo ini ndinotarisira kuti iwe ugozogovera muchikamu chemashoko pazasi.
Ini ndinofunga iro SEO renyika rave kunyatso kuve rakaomesesa rekupedzisira. Kune mashoma mashoma maitiro akagamuchirwa neakasiyana siyana emunda ayo asingabatsiri zvechokwadi. Izvo zvakati, ini ndinofunga imwe nzira yakapararira iyo inoda kufa ndeye isina kuzviita, inotonhora-kusvika kune mushanyi kugovera. Ruzhinji rwezvikumbiro izvi rwakaitwa zvisirizvo uye ndinofungidzira kuti pavanowana mhinduro, zvinowanzo kubva kunzvimbo chaidzo iwe dzausingade kuve muenzi kutumira. Randi Fishkin, Moz
Link building. Zvagara zviri zvakapusa kwandiri kushandisa yakawanda nguva pakabatana kuvaka matekiniki uye ipapo kugadzira izvo zvirimo pakutanga. Ndakagara ndati zvakafanana nekusundira dombo rakatenderera uchikwira chikomo. Nesimba, inokwira chikomo, asi giravhiti inogara ichidzosera kwainofanira. Ita kuti peji rako rive nani kupfuura chero peji ripi zvaro pawebhu nezvenyaya imwe chete, kana kuti usaburitse. Inogara ichishanda. Hapana post-yemukati yekugadzira yekuedza inodiwa. Patrick Sexton, Fudza Iyo Bot
Kune zvinhu zvishoma kwazvo zvisina basa zvachose; zvinhu zvese zvine nzvimbo. Naizvo zvataurwa, kuwedzera yako saiti kune hofori dhairekitori inonzi PR6links4U.biz parizvino yatama kupfuura zvisingabatsiri kupinda munzvimbo ine njodzi. Ini ndinonzwa ndakasununguka kuraira vanhu kuti vasambo wedzera saiti yavo kune chero dhairekitori iyo inoita kuti chero munhu awedzere yavo pachavo ruzivo pasina chero mwero. Phil Buckley, Curagami
Guest Blogging. Ini handidi kubata izvi nedanda rechikepe ikozvino, asi chete pane chinongedzo-kuvaka chiri kunetsekana. Pachine mabhenefiti kune izvi, asi vanhu vanongoda kubuda mundangariro kuti iyi haisisiri nzira yekuwana zvinongedzo. Andy Drinkwater, IQ SEO
Ini pachangu, ndinofunga izvozvo content marketing zano risina basa - parinoshandiswa roga (heya tarisa, mhinduro yekubuda). Ndiri kuona vanhu vakawandisa vanotora iyo "kuvaka iyo uye ivo vanouya" nzira yezvinyorwa, iyo yavanowisa zvemukati kunze uko vobva vangogara padhongi ravo vachitarisira zvinongedzo, migove uye mhedzisiro. Izvo hazvishande zvakadaro. Iwe unonyatsoda kuve unoita nekushambadzira kwaunoita zvemukati uye zvine hungwaru, usati watogadzira izvo zvirimo, iwe unofanirwa kuisa iyo tsvagiridzo mukuwana kwete kwete zvingangoita zvemukati pfungwa, asi zvinogona kuburitsa nzira. Imwe yeakanakisa ezvekushambadzira zvinyorwa zvandakaona mumakore achangopfuura ndeye Mutengi Dev Dev Labs gwaro rekubira Google News, ichikupa gwara rakanakisa rekutsvaga vanyori vakafukidza yako yakatarwa musoro wenyaya munguva yakapfuura uye vangangoda kuzviita zvakare. Kana iwe ukabatanidza zvemukati kushambadzira pamwe nekutsvagisa kwakaringana, zvinogona kubva pakuva zvisina basa kusvika pamutengo. Tom Roberts
Ndingangodaro ndakati Meta Keywords inogona kunge isingakoshe. Vamwe vemawebhusaiti vachiri kuda kupamha iyi ndima. KweBing vanogona kuburitsa kukosha asi kweGoogle ini ndingati yakanyanya kukosha. James Norquay, Kubudirira Media
Vanhu vazhinji vanosvetukira pa ichangoburwa SEO zano, zvisinei nekuti ndezvipi chaizvo nekuti iri kutaurwa nezvayo zvakanyanya, asi pasina kunyatsofunga nezvayo mune ino saiti uye chiratidzo chavari kushanda nacho. Dhijitari PR inogona kushanda zvakanyanya kune mamwe niches kupfuura mamwe, semuenzaniso. Zano rangu ndere kugara uchitarisa tambo dzese dzinokwanisika pakutanga asi wozodzikira pasi zvichibva pakukwanisa kudzoka mukudyara mukati meiyo niche chaiyo. Simon Penson, Zazzle
Handingataure izvozvo rel = kunyora haina maturo, zvinoita sekunge ichakosha zvakanyanya mune ramangwana, asi ini ndinofunga haisi chinhu chikuru parizvino. Ino ndiyo nguva yekuvaka hwaro, haisati yave nguva yekuona mhedzisiro. Danny Dover, Wepamoyo.com
Mazhinji maSEO anofuratira kuita zvinhu zvinovawanisa chinongedzo chisina, asi ini ndinotenda pane kukosha kukuru mukati nofollow zvinongedzo izvo zvinogona kutumira traffic inokwanisa. Randi Fishkin, Moz
Handina chokwadi nazvo gakava ndicho chirevo chakakodzera kutsanangura izvi asi guest posting zvirokwazvo inzvimbo iyo, pachiso chayo, yakave yakadyiwa neGoogle nevamwe munguva pfupi yapfuura. Muchokwadi, nyaya yacho haisi yekutumira kwevaeni, inova kwandiri hunyanzvi hwekugadzira nekugovana zvemukati zvakakura nemasaiti akakodzera, asi panzvimbo pezvo "spammy" matekiniki ayo akango nyorwa neiyo moniker. Zvagara zviri izvo zvekuti kugadzira zvakachipa, zvisingaverengeke zvemukati uye kubhadhara isina kunaka saiti saiti kuti uiise pamwe nehungwaru maitiro akashata uye anofanirwa kumiswa, asi izvo hazvisi zvevaeni kutumira, izvo spam. Simon Penson, Zazzle
Guest blogging. Pasina kupokana, kubva pakuona kwechiratidzo uye mutsva wevateereri maonero hapana zvirinani. Kana icho chikonzero chauri kuzviitira chiri cheichi chinongedzo chete, usazvinetse, asi kana chinangwa chako chiri chekudzidzisa uye kufadza vaverengi ipapo uchaona yakanaka bhizinesi mhedzisiro. Phil Buckley, Curagami
Kune akawanda pano, saka ndiri kusarudza imwe ine vanhu vakagara kudivi reruzhowa - uye vamwe pariri! Peji Chinzvimbo Kuveza ndeimwe yenzvimbo idzo dzakasangana manzwiro pakati peavo vari mune tekinoroji SEO nyika. Nekudaro, izvi zvinofanirwa kutarisirwa zvakanaka nekuti haudi kupedzisa nenyaya kana Googlebot yauya kuzoshanya. Zviitise chaiko, uye pane zviripo zviripo zvekuve nazvo. Andy Drinkwater, IQ SEO
Ndinofanira kutaura guest posting, ndiyo imwe yenzira dzakakosha kwazvo dzekutora chiratidzo chako uye chirevo pamberi pevakuru kana vamwe vateereri iwe uchitova nazvo. Sezvo ini ndinoshandira muparidzi ini kazhinji ndinowana inotyisa muenzi kutumira mazano uye / kana mapango. Iwe unofanirwa kugara uchiunza yako 'A' mutambo, kana kuyedza. Martijn Scheijbeler, Iyo Inotevera Webhu
Chokwadi, ese eaya maitiro anonyorwa se ngowani nhema, kana ngowani chiri chinhu chako, chine mwero wekukosha. Kunze kweizvo zvisiri pamutemo zvisiri pamutemo (Joomla plugin vanoshandisa, ndiri kukutarisa), unogona - uye unofanirwa - kuona kukosha kweaya ese matekiniki, angave ebloggi network, yekubatanidza rentals, redirects kana kunyangwe yakanaka yekare fashoni spam . Chikonzero nei mamwe maSEO achiri kushandisa aya matipi nekuti achiri kushanda. Ivo vachiri kugadzira mari. Chokwadi, iwo masosi anozopedzisira arangwa asi kana ukashanda bhajeti yako uye kudzoka kwako mukudyara, unogona kuita purofiti.
Zvino, kana iwe uri kufunga nezvekuvaka mhando uye kusimudzira iyo webhusaiti uye uchida kushandisa matekiniki seaya, iwe unofanirwa kupfurwa. Kana iwe uchifunga kuti unogona kuisa panjodzi yekuisa chiratidzo chako pamhepo nekushandisa nzira dzeSEO dzinogona kukuona uchirangwa uye uchiremerwa, unofanirwa kubuda mumutambo weSEO zvachose. Wakapusa, wakashata uye hauna shamwari. Pane kudaro, tsaura kuyedza uye kuitise pane yakasarudzika saiti uye pamwe mune rakasiyana zvachose kiyi kiyi kiyi boka zvachose. Isa dzimwe nzira bvunzo. Edzai mutengo, masosi, traffic uye zvinotungamira. Wakaisa marii? Inguva yakawanda sei? Zvakanga zvakakodzera here?
Funga nezvazvo sedhipatimendi reR&D - sevashambadziri, isu tine chikwereti kukambani yedu kuti iongorore nzira dzese dzinogona kuburitsa mari. Kungangoita kuti dzimwe dzedzimwe nzira dzinogona kuita izvo chete. Kana ivo vanogona kunge vasingakwanise mune zvemari. Kana ivo vanogona kukundikana zvachose. Iyo poindi ndeye kuyedza uye kuona izvo zvinoshanda kwauri. Bvisa zvinyorwa uye fungidziro uye enda pane data. Tom Roberts
Kunyangwe ichingoita nharo yekutaurirana, ini ndichiri kutenda chaiwo machikamu (EMD's) uye zvikamu zvematanho ematanho zvine kukosha kweSEO. Izvi hazvireve kuti haugone kumisikidza pamberi pemumwe munhu ane EMD kana iwe usina. Zvinoreva kuti kune imwe kukosha kwariri kana iwe uchigona kuwana EMD kana PMD. Robert Fisher, Mutungamiri, dhiramuBEAT Kushambadzira
Ndingangodaro nditi kuvaka webmasters kuvaka akadonhedza domains uye kuvashandura kuva masayiti ehukama, izano iro richiri kushanda, kana iyo link profile yakachena. Asi kana varidzi vewebhu vachikwirisa padanho rakakura Google inogona kuipukuta uye iwe uchiona izvi zvichiitika nguva nenguva. Asi, iwe unonzwira tsitsi kune vanobatana vanongoda kuita mari. James Norquay, Mutungamiri Wekutarisa, Prosperity Media
Iri kutanga kuita senge Adwords shandisa iri kunyatso kuve nekukanganisa pane organic. Handifunge kuti yakasungirirwa pamwe chete asi zviri pachena kubva kudhatabhesi yangu kuti yakabatana. Izvi zvakasiyana kubva kunyangwe gore rapfuura apo kuwirirana kwanga kusiri kujeka. Sezvo Google inotanga kunzwa ichiwedzera kumanikidzwa kubva kumagariro enhau, zvine musoro kuti vaizosunungura yavo yavo marongero mukati medhipatimendi masvingo. Danny Dover, Wepamoyo.com
Kune yakawanda ngano inovaka zvakanaka, zvakasarudzika zvemukati inofanirwa kuve yakanaka zvakakwana kuti uwane masiteki. Izvo hazvina kumboitika kwenguva yakareba, uye zvakaringana zvekukambaira uye kunongedzwa hazvireve kuti zvakakwana kukwana chinzvimbo. Kana usiri kuburitsa yakanakisa mhedzisiro mune gumi gumi, nei Google ichifanira kukuisa? Randi Fishkin, Moz
kuti kutumira muenzi kwakafa! Uye zvakare iyo SEO iri munzira yekubuda. Kuvaka vateereri vekukosha kuburikidza nekutsvaga kwekutsvaga hakusi kuenda chero nguva munguva pfupi uye kana zvirizvo zvinoita SEO izvo zviripo zvekugara. Iwo matekiniki anodikanwa kuhwina anogona ikozvino kusanganisira mamwe madhiri asi chidimbu chehunyanzvi chichiri chakakosha sezvakamboita mukuwedzera ROI kubva mugero. Simon Penson, Zazzle
Iyo huru SEO ngano mumusoro mangu ndeyekuti SEO inoshanda kupfuura dhizaini uye kubatsira. SEO chikamu chidiki cheicho chinoita kuti saiti ishande, kwete chikamu chikuru. Patrick Sexton, Fudza Iyo Bot
Kana mumwe munhu akati 'SEO saiti yangu' izvo zvinoshandura chaizvo kuti, Ini handina zano rekuti ndive akakodzera sei pawebhu uye kuda rubatsiro. SEO haisi kumira-wega kutsvaga zvakare. Kana iwe uine munhu wako weSEO mune silo kuenda parutivi, zvese zvimwe zvinhu zvekuvapo kwako kwedigital zvinotambura. Dhiagramu yeVenn yeSEO ikozvino inopindirana nevanyori, mifananidzo, hukama hweveruzhinji, vhidhiyo uye R&D Phil Buckley, Curagami
Kuti kushandiswa kweshoko rakakosha Meta tag kunobatsira kana Keyword Kuwanda. Tora chako kubva kune chimwe cheizvi. Keyword Meta tags vakatorerwa bhenefiti kubva kuGoogle makore mashoma apfuura, kunyangwe vamwe vachiti vane bhenefiti muBing - asi idiki. Kuwana iyo Keyword Density kurudyi pane peji iri zvakare imwe iyo yakarasa mabhenefiti mamwe makore apfuura, zvakadaro pane spammy maemail atinowana tese kubva kune aya 'epasi rose' makambani eSEO, ivo vachiri kutaura nezve izvi. Tora peji rako rizere nemazwi akakosha izvozvi, uye uchaita zvinokuvadza kupfuura zvakanaka. Andy Drinkwater, IQ SEO
Kuti iwe haufanire track masosi nekuti ivo vakajairwa mazuva ano uye zvichingodaro havafanirwe kuvimba. Iwo maSeO makuru akati wandei pamusoro peizvi sezvo 'zvisina kupihwa' zvakatangwa kuti nei uchifanira kuzviteedzera: zvakazara ivo vanopa tarisiro huru pane zvauri kuita mumainjini ekutsvaga. Ini ndinobvumirana navo zvachose, zvinokupa ruzivo rwakakura munzvimbo yako yazvino mumusika uye zvinotipawo data rakakosha kune vangangokwikwidza apo patinobatanidza izvi neyedu kiyi yekutsvaga kwekuedza. Martijn Scheijbeler, Iyo Inotevera Webhu
kuti SEO ndizvo zvese zvaunoda. Iko kune kwakajairika kufunga kwekuti iwe unoshandira yakanaka SEO kambani uye ivo vanozokubatsira iwe kuita mamirioni emadhora mukati memwedzi uye iyi ndiyo chaiyo ingano yakajairika mune yedu indasitiri. Ini ndinotenda kukura kwebhizinesi kunoenderana nezvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira mhando yebasa kana chigadzirwa, kukosha kwechiratidzo, shanduko yemusika, kushambadzira, mabasa evatengi nezvimwe. SEO ingori chikamu chimwe chete chekushambadzira. Moosa Hemani, SEtalks
Chinhu chandinogara ndichitaura kune vanhu vatsva kuSEO kusatenda zvese hype. Izvo zvinoenda nekusatora izwi reGoogle sevhangeri uye kusatenda ese SEO blog post iwe yaunoverenga. Chokwadi ndechekuti, ruzhinji rweSEO blog mablog ndeyechokwadi mabhaidhi. Yakawanda ingano, yakawanda ingano - mazhinji maSEO mabloggi haazive nguva yekuvhara uye vazhinji vacho havazive kuzvininipisa kana ikasvetuka ikavarova kumeso (unogona kugadzira pfungwa dzako kumusoro pane kuti iwe unoona izvi zvakashamisa, kana meta).
Kune vanhu vari muindasitiri, ini ndinofungidzira Munyori Chinzvimbo chingori chengano, zvirinani munzira iyo yakawanda maSEO blogger anotenda kuti ishande. Zano rangu ipapo raizove rekudzivirira ruzha rwese uye enda unoverenga zvinofarirwa naBill Slawski naMark Traphagen vataure nezvenyaya iyi - zvirinani ipapo iwe unowana ruzivo rwakakodzera uye kwete mhedzisiro yemusango. Tom Roberts
Kuti ruzhinji rwevanhu vanoti ivo kana kambani yavo ndeye nyanzvi SEO kambani ndizvo chaizvo. Iyo yakawanda kwazvo mafemu anoti SEO ruzivo, pane zvakanakisa, 10 kana 11% nzwisiso yeSEO. Robert Fisher, dhiramuBEAT Kushambadzira
Iyo huru SEO ngano ingangoita vanhu vanofunga kubhadhara $ 1 miriyoni pa PPC ichanyatso kubatsira yako SEO mushandirapamwe. James Norquay, Kubudirira Media
Iyo yazvino yakakura kwazvo SEO nhema ndeyekuti SEO iri kurarama uye ichienda yakasimba. Muchokwadi, zvakanyanya kuoma kushanda neSEO kupfuura zvayaimbove. Mazuva ese, SEO iri kuve isingaite simba rekushambadzira chiteshi. Danny Dover, Wepamoyo.com
Kuti kana iwe ukaita PR kana zvemukati kushambadzira uye ukawana yakakwira kukosha masosi masosi anouya asina anchor zvinyorwa zvinongedzo. Chingori chidimbu chimwe chete cheSEO puzzle. David Konigsberg, Akaringana Targeting
Mhinduro dziri pamusoro dzakarongedzwa zvishoma kuti dzijekeswe uye hupfupi.
Tags: adwords shandisaAndy Kunwa mvurakunyorangowani nhemangowani nhema seoContent Marketinginopokana seocuragamiDanny DoverDavid konigsbergpataniDirectoriesakadonhedza domainskushambadza kwengomachaiyo match domainfudza iyo botzvakanaka zvemukatimushanyi kugoveraiNet SEOIQ SEOJames NorquaylifelistedLifelist.comchinobatanidza-kuvakamukomananofollownofollow zvinongedzokwakanakira kunongedzapeji chinzvimbo kuvezapatrick sextonphil buckleyppcnyanzvi seoKubudirira Midhiyaranda hoverobert hoveseo mupenyuseo yakafaseo nganoizvo nganoseo maitiroseo maringe dhizainiSimon PensonTom Robertsyakasarudzika zvemukatizvisingakoshi seoZazzle
Aug 15, 2014 pa 9: 40 AM
Great post Kieran! Ndatenda nekugovana ruzivo rwakakosha rwuri kugoverwa pano..